DAAWO SAWIRO:-Beeraleeyda gobolka Hiiraan oo ka cabaneysa biyo la aanta Wabiga Shabeelle – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:-Beeraleeyda gobolka Hiiraan oo ka cabaneysa biyo la aanta Wabiga Shabeelle
Hiiraan Xog, Feb 11 , 2018:- Wabiga Shabeelle oo ah Wabiga Labaad ee ugu dheer Dalka Soomaaliya ayaa guray , iyadoo kumanaan ruux ay saameen ku yeelatay biyo la’aanta Wabiga Shabeelle.
Sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin maamulka gobolka Hiiraan Wabiga ayaa guray, waxaana uu sameyn ku yeeshay bulshadda kunool gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe.
Biyo la’aanta Wabiga Shabeelle ayaa waxa ay dhibaato ku tahay kumanaan Qoys oo ku nool hareeraha Wabiga Shabeelle, kuwaas oo noloshooda ay ku xirneyd Biyaha Wabiga Shabeelle.
Maamulka gobolka Hiiraan oo ka hadlay dhibaatada biyo la aanta Webiga Shabeelle ayaa sidoo kale sheegay in xataa ay gureen ceelashii Biyaha waxaana uu Hay’adda Gargaarka ugu baaqay in la caawiyo dadka kunool gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Mamulka Gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale xusay in degaanka Ceel-Gaal Biyaha looga keeno Magaalada, islaamarkaana Fuustaddii Biyaha ay Magaalada ka marayso ku dhawaad 40 kun oo Shilin Soomaali ah.
Sanadyadan danbe ayaa la arkayay in uu Wabiga Shabeelle biyo laga waynayay oo beeraleeyda aay cabasho xoogan ka keeneysay.
Shir looga soo horjeedo maamulka Jubbaland oo ka furmay magaalada Muqdisho